Ndenye User Guide maka iPhoto i
iPhoto bụ a reloaded Mac App. Ọ na-enye a ha ha ahụmahụ ka ndị ọrụ na-ndokwa ngwaahịa elu, ma dezie ha foto. Ọ bụ ezigbo foto ngwá ọrụ maka ụmụaka nakwa dị ka ọkachamara foto shoppers na nwekwara ike-eji ịtụ Mbipụta, kaadị ekele, ike slideshows, foto akwụkwọ, na albums & ịrụ akpaka nchọpụta ihu. Ebe a bụ a ngwa ngwa ọrụ ndu maka iPhoto.
3. Hazie foto
4. Mma foto
5. Share, zọpụta foto na slideshows
N'ihu na-eji iPhoto na-etinye na iji, megharịa, na ịkọrọ gị photos, i kwesịrị mbubata gị photos n'ime iPhoto na kọmputa gị. Jiri USB na na ị nwetara na gị igwefoto na jikọọ na igwefoto na USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa ma ọ bụ ọ bụrụ na gị Mac nwere SD kaadị oghere, ị nwere ike itinye na kaadị na kọmputa gị ma mgbe mbubata si kaadị kwa. Ọ bụrụ na foto na-adịghị na-emeghe emeghe iPhoto, mgbe ahụ ị ga-jụrụ mbubata photos, na mgbe ahụ na-eso otu n'ime ndị na-esonụ:
Mbubata niile foto site na gị igwefoto, pịa Import All bọtịnụ.
Mbubata nanị ụfọdụ foto, pịa Wụk isi mgbe ị pịa foto ọ bụla ị chọrọ mbubata, wee pịa Bubata họrọ bọtịnụ.
Ọ bụrụ na gị igwefoto na-abịa na otu nhọrọ ka ihichapụ foto mgbe importing, ọ na-atụ aro ghara ihichapụ ha. Na-ha na gị na igwefoto ka ịnweta ha si ọzọ kọmputa e mesịa.
Mgbe ọ gụchara ihe usoro pịa idaputa bọtịnụ ma ọ bụ ịdọrọ igwefoto si icon ka iPhoto ka n'ebemkpofuozi na Isi Iyi ndepụta tinyere n'aka ekpe nke iPhoto window, ka e gosiri n'elu na ihe oyiyi ahụ. Gbanyụọ igwefoto, ma ikwụpu igwefoto na kọmputa gị.
Mgbe ị na arụchaala ibubata usoro, iPhoto ga-akpaghị aka ìgwè ha n'ime Iketịbede, dabere na oge na ụbọchị na foto e. N'ihi na Ịhazigharị gị otu photos aka iji setịpụrụ dị iche iche gburugburu, pịa iji họrọ ihe si Isi Iyi ndepụta ọzọ na n'aka ekpe nke iPhoto window, dị ka e gosiri n'okpuru ịhụ foto gị na Iketịbede na ndị ọzọ na echiche, dị ka gị na nso nso dị photos , na photos haziri ndị mmadụ (Faces) na ebe (Ebe). Isi Iyi ndepụta na-enyere gị na ohere nile ihe na gị iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
3. Hazie Photos
iPhoto-enyere gị ike ọba iji hazie foto gị site na ige. Ka ịmepụta album, dị họrọ File> New Album. Mgbe ahụ pịnye a gị aha album na pịa Mepụta.
Mgbe ahụ, pịa Library na ịdọrọ photos ọhụrụ gị album na isi iyi ndepụta na ekpe. I nwekwara ike ịgbakwunye foto na album site:
Ahọpụta ole na ole foto na mgbe ahụ ị na-ahọrọ File> New Album si Nhọrọ, ma ọ bụ
Ịdọrọ a nchekwa nke foto ndị si a Finder window n'ime Isi Iyi ndepụta.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe ka nke foto na a album site ikpuru-n-dobe photos na iji ị chọrọ. I nwekwara ike ihichapụ foto si album. Iji mee nke a, dị nnọọ họrọ lekwasịrị foto na pịa Nhichapụ isi.
4. Mma photos
Ị nwere ike imeghe a foto na edit echiche ime mgbanwe dị otú ahụ dị ka wepụ red-anya, cropping, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye mmetụta na ndị ọzọ.
Dị ka e nwere ọtụtụ foto iwere na a flash, ndị na-apụta ka nwere red ụmụ akwụkwọ. Ị nwere ike radically belata ndị a na ụdị mmetụta ma ọ bụ nwekwara ike wepụ ya kpam kpam. Ihe i nwere ime bụ nnọọ pịa foto na họrọ ya, wee pịa Dezie bọtịnụ na toolbar na ala nke iPhoto window na Pịa Idozi Red-Eye bọtịnụ. iPhoto ga Nchekwa onwe-idozi red-anya na ga-ewepụ red-anya n'ihi na ị mgbe ahụ ịzọpụta mbipụta, pịa mere bọtịnụ. Ọ bụrụ na-enweghị mmasị n'ebe mgbanwe ị na-mere, ị nwere ike-aghọ mbụ foto, otú ịnwale nnwale na-amalite na ịgagharị.
Akuku a foto
Akuku foto mgbe mbipụta na-naanị òkè ị chọrọ na-ewepụ ndị na-achọghị ebe, ma ọ bụ ibipụta foto na kpọmkwem size, dị ka 4 x 6 ma ọ bụ 5 x 6 sentimita asatọ. Họrọ foto na mgbe ahụ họrọ Dezie> akuku. The akuku njikwa-apụta na a nhọrọ rektangulu egosi gburugburu ókè-ala nke foto.
Ị nwekwara ike inye gị photos pụrụ iche utịp site na iji a Nchikota ọtụtụ otu-click edezi nhọrọ.
Agbatịnụ a foto
Ọ bụrụ na a foto bụ obere curved, ị pụrụ ime ka ya ogologo site na ịpị foto na họrọ ya, wee pịa Dezie bọtịnụ. Pịa agbatịnụ bọtịnụ. The n'akuku mmịfe na-egosi, na a okporo na-karịrị n'elu foto-enyere gị aka mmezi foto kpọmkwem.
Ịzọpụta gị foto dị ka .jpeg faịlụ ele ha na ndị ọzọ na kọmputa, pịa foto ị chọrọ ịzọpụta, wee pịa na faịlụ na mbupụ. Jide n'aka na mbupụ faịlụ na JPEG usoro. . Ihe faịlụ nwere ike zọpụta ka a flash mbanye ma ọ bụ CD.
Iji zọpụta a ngosi mmịfe dị ka a QuickTime nkiri na ike ga-Nọrọ na Nche na PC na Macs, họrọ QuickTime taabụ na-agbanwe aha gị ngosi mmịfe ma họrọ a size, pịa bupu bọtịnụ. Ị ga-enwe ike ịkọrọ faịlụ a dị ka ihe email mgbakwunye ma ọ bụ i nwere ike ire ya ka a CD ma ọ bụ DVD.
> Resource> Mac> Quick User Guide maka iPhoto